जब "cardial प्रकार मा NTSD" को एक निदान सामना धेरै विरामीहरु, आश्चर्य - यो के हो र कसरी उपचार गरिन्छ? Cardiopsychoneurosis, वा हृदय neurosis, को हृदय प्रणाली को उल्लङ्घनको गठन। अक्सर, यस्तो समस्या तिनीहरूले तनाव, या अत्यधिक व्यायाम को प्रभाव बढी susceptible हुन्, किशोरों र महिला मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
NCD हृदय सुविधा प्रकार
धेरै विरामीहरु को एनडीसी हृदय प्रकार पहिचान। यो के हो र त्यहाँ यस्तो विकार छ कसरी? यो यसको लक्षण धेरै अन्य रोगहरु को लक्षण समान छन्, किनभने निदान छैन जो सजिलो छ बरु जटिल रोग छ।
को एनडीसी को मुख्य विशेषता यसको manifestations को विविधता छ। धेरै विरामीहरु यो अवस्था अप्रिय र पीडादायी sensations मा उत्पन्न लगभग सबै अङ्गहरू र प्रणाली जब भन्छन्। हृदय neurosis उल्लंघन श्वसन, endocrine, स्नायु र हृदय प्रणाली provokes। यस्तो रोग को उपस्थिति मा मान्छे शारीरिक exertion र विभिन्न स्नायु विकार धेरै गरिबी सहन छन्।
विकार उत्पन्न हुन सक्छ जो कारण लागि
बच्चाहरु र किशोरों NDCs मा हृदय प्रकार तथ्यलाई देखि उत्पन्न आन्तरिक अङ्गहरू अझै पूर्णतया गठन छैनन्, र त्यहाँ एक मजबूत हर्मोन वृद्धि छ। वयस्क यो रोग को विकास गर्न मुख्य खतरा एक व्यक्ति सम्हाल्न सक्दैन तनावपूर्ण परिस्थिति मानिन्छ।
NCD को कारण दुवै आन्तरिक र बाह्य दुर्व्यवहार हुन सक्छ। उत्तरार्द्ध समावेश:
आसीन वा अचाक्ली सक्रिय जीवन शैली;
घरेलू र औद्योगिक विकिरण;
caffeinated पेय पदार्थ को ठूलो मात्रा को खपत;
धेरै सुख्खा र तातो climatic अवस्था।
NCD हृदय प्रकार को घटना को आन्तरिक कारण समावेश:
गर्भावस्था को समयमा हर्मोन मा वृद्धि;
व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वभाव;
पुरानो संक्रामक प्रक्रिया;
आन्तरिक अङ्गहरूको इनकार;
को स्नायु प्रणाली को विकार;
यो रोग को कारण धेरै फरक छ, तर त्यहाँ आन्तरिक अङ्गहरूको कुनै उल्लङ्घन हो।
न्यूरो dystonia को प्रकार के हुन्
जब निदान आईसीडी एनडीसी मा कोड हृदय प्रकार द्वारा के निर्धारण गरिन्छ जान्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। dystonia विभिन्न प्रकारका आफ्नै उपस्थिति र उपचार छ। यो cardial प्रकार मा आईसीडी एनडीसी कोड हालै स्थापित टिप्पण लायक छ। यो दाग रोग को जटिलता सुविधा र पाठ्यक्रम संकेत गर्छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो हृदय neurosis लक्षण छ र यसको आफ्नै तरिकामा चल्छ। एनडीसी प्रकारका स्नायु प्रणाली को कुनै पनि भाग को विनाश को विशेषताहरु द्वारा निर्धारित छन्। रोगी NDCs कस्तो आधारमा हृदय प्रकार को, लक्षण धेरै फरक हुन सक्छ। तर कुनै पनि मामला मा उनि बेचैनी को धेरै कारण।
विशेष मा NCD यी प्रकार आवंटित गर्न सम्भव छ:
cardial मा dystonia;
NCD आईसीडी-10 को cardial प्रकार स्नायु प्रणाली को विकार आफूलाई हृदय र रक्त नली बाट मुख्यतया प्रकट कि विशेषता छ। यस्तो मामला, दबाव मा एक केहि छिन रहने वृद्धि, मुख्य रूप विशेष तयारी प्राप्त बिना बित्दै जसमा।
को एनडीसी को मुख्य लक्षण मौलिक टाइप गर्न
यो यस्तो NCD रूपमा रोगहरु को निदान यो अवस्था बारे सबै थाहा धेरै महत्त्वपूर्ण छ हृदय प्रकार को: यो के हो र के लक्षण हुन सक्छ। रोग प्रारम्भिक चरणमा छ पूर्ण नै प्रकट गर्छ सक्नुहुन्छ, तर अझै पनि शरीर मा disturbances उपस्थिति पहिचान गर्न मद्दत गर्ने विशिष्ट संकेत हो। यी समावेश:
एक व्यक्ति को स्नायु प्रणाली गतिविधि को गिरावट संग चक्कर आना, टाउको दुखाइ, र आफ्नो तापमान वृद्धि अनुभव हुन सक्छ। साथै, त्यहाँ हृदयमा पीडादायी sensations, impeded श्वसन हो, दबाव भिन्नता आउँदैन।
गर्भावस्था को NCD हृदय प्रकार
NCD मा cardial प्रकार (आईसीडी-10) कोड किनभने त्यहाँ हर्मोन, भावनात्मक र एक महिलाको शरीरमा शारीरिक बोझ छ यो समयमा, गर्भावस्था को समयमा अक्सर अवलोकन।
समयमा रोग बालक जन्ममा नै पूर्ण प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ छैन, तर यो महिला र बच्चाहरु को एक गम्भीर खतरा poses। गर्भावस्था बेला एनडीसी उपस्थिति को एक चिन्ह एक बारम्बार बेहोशी र चक्कर आना हुन सक्छ। साथै, हृदय neurosis यस अवधिमा नै को रूप मा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ:
हावा कमी को भावना।
प्रायजसो, पीडादायी अवस्था विशेष उपकरण प्रयोग बिना प्रसब पछि टाढा जान्छ। तथापि, गर्भावस्था को समयमा एक महिला नियमित रूपमा चिकित्सकको यो अवधिमा dystonia थप जोडले हुन्छ रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।
को एनडीसी र सेना उपयुक्त छन् गर्छ?
यति धेरै Recruits केही अरूलाई, त्यसको विपरीत, सेवा उम्कन गर्ने प्रयास गर्दा, फिर्ता मातृभूमि दिन जाने, यो भने हृदय NDCs एक प्रकार छ, सैनिक सेवा गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर चिन्तित छन्। यस सन्दर्भमा, चिकित्सा आयोग को दृष्टिकोण बहुमुखी र उद्देश्य हुन छ। केही अवस्थामा, त्यहाँ हृदय प्रकार को NDCs हुँदा, सेना कडाई contraindicated छ। रोग स्थायी र acutely प्रकट हुँदा यो हुन्छ।
चिकित्सा परीक्षक निर्धारण पर्छ रंगरुट को खण्ड संग:
लगातार वा आवर्तक infringements अवलोकन गर्दै;
वृद्धि वा कम दबाव रूपमा;
त्यहाँ एक दिल ताल विकार छ कि छैन भनेर;
रोग प्रदर्शन प्रतिबिम्बित कसरी खराब।
स्थिति को जटिलता निर्धारण गर्न, सम्बन्धित पेशेवरों को रंगरुट एक सर्वेक्षण सञ्चालन संलग्न हुन सक्छ। साथै, सम्पूर्ण जीव को निदान स्पष्ट गर्न एउटा सर्वेक्षण बाहिर छ। रोग को रंगरुट पहिचान मा उपचार गर्न निर्देशित छ, तर यदि यो इच्छित परिणाम ल्याउन छैन, यो सैनिक सेवा मुक्त छ।
निदान न्यूरो dystonia
हृदय प्रकार को NCD निदान रोगी को एक विशेष परीक्षा पछि सेट गरिएको छ। अन्तिम निष्कर्षमा गर्नुअघि, डाक्टर रोगी, सहायक र प्रयोगशाला अनुसन्धानहरूले संग कुराकानी आयोजित। सही ढंगमा निदान स्थापना गर्न, पर्छ तपाईं:
को अन्तस्करणले र हृदयको एक अल्ट्रासाउंड के;
एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, echocardiography, PCG undergo।
साथै, आवश्यक परामर्श विशेषज्ञहरु यस्तै लक्षणहरू अन्य रोगहरु को उपस्थिति निकाल्न सक्षम हुन। सही निदान लागि अंगहरु र शरीर प्रणाली पूर्ण र विस्तृत परीक्षा पास गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले, हृदय प्रकार को NDCs निको पार्न यो सम्भव छ? यसलाई के हामी पहिले नै पाएका छन्। तपाईं रोगी को तीव्र रिकभरी सुनिश्चित जो रोग, को योग्य उपचार टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ। जब स्नायु प्रणाली विकार र दबाइ लोकप्रिय उपचार लगे। भौतिक चिकित्सा र अन्य गतिविधिहरु संग संयोजन मा बाहिर तालीम उपचार desirably लगे छ। विशेष, चिकित्सकीय मालिश, को समस्या सामना गर्न धेरै राम्रो मद्दत परिपत्र शवर र electrophoresis। यी सबै प्रक्रिया राम्रो मुड को उद्भव योगदान र स्नायु प्रणाली बलियो बनाउन।
औषधि मात्र बिरामीको अवस्था आधारित एक डाक्टर र रोग को जटिलता चयन गर्नुपर्छ। restorative उपचार र औषधी संयोजनमा "Gerovital", "डा Theiss" र अरूलाई, उदाहरणका लागि भिटामिन र एंटीओक्सिडेंट जटिल, लाग्न सक्छ।
अक्सर, को स्नायु प्रणाली को विकार संग विरामीहरु जस्तै दबाइहरु सल्लाह दिन्छन्:
तिनीहरूलाई केही दिल ताल disturbances ट्रिगर हुन सक्छ सबै दबाइहरु, लग्नु गर्नुपर्छ कडाई यो खुराक मा एक डाक्टर को पर्यवेक्षण अन्तर्गत।
असाध्यै राम्रो प्रभाव परम्परागत चिकित्सा को माध्यम द्वारा दिइएको छ। जब उच्च दबाव broths टंकशाला पात, सौंफ बीउ र कैलेंडुला फूल लिन सिफारिस गरिएको छ। सामान्य दबाव र कम लागत पेय ताजा गाजर को रस, शोरबा rosehips, Immortelle मा।
हृदय प्रकार को NCD रोकथाम पूरा
NCD को घटना रोक्न, यो निवारक उपाय लिन आवश्यक छ। यो तनावपूर्ण परिस्थिति, सुतिरहेको र बानी खाने, दिन को सही मोड पालन गर्न बच्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सिफारिस मेनू भिटामिन र खाद्य प्रशस्त सानो अंश मा उपभोग गर्न समावेश गर्नुहोस्। निद्रामा हुनुपर्छ पूर्ण र दिनमा तपाईं विश्राम लागि समय छुट्याइएको गर्न आवश्यक र चलाउँछ। NCD विकास रोक्न, आवधिक निवारक परीक्षा undergo र आवश्यक भएमा विद्यमान उल्लंघन व्यवहार सुनिश्चित। केवल योग्य निवारक उपाय रोग को उद्भव जोगिन हुनेछ।
लहरे खोकी लक्षण के हो? लक्षण र रोग को उपचार
Flatulence: र यो व्यवहार कसरी यो के हो
को exacerbation अवधिमा पेट अल्सर संग भोजन। दैनिक मेनु
शुरुआती लागि Windows XP निर्देशन कसरी पुन: स्थापना गर्न
सानो कुकुर नस्ल - आफ्नो ठूलो र विश्वासी मित्र
सजिलो तरिका देख गर्ने छैन ती वफादार मित्र - होन्डा XR 250
मेष र क्यान्सर - संघ सफल छ?
रूस मा परोपकारी संगठनहरूको: जानकारी को सूची